Barcelona oo ku dhow inay la saxiixato xiddig ka tirsan kooxda Chelsea – Gool FM
Dajiye May 24, 2022
(Barcelona) 24 Maajo 2022. Saxafiga caanka ah ee looga haray suuqa kala iibsiga ciyaartouda ee Fabrizio Romano ayaa shaaca ka qaaday, in kooxda kubadda cagta Chelsea ay albaabada u furayso bixitaanka daafaca bidix ee Marcos Alonso inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga,
31 jirkan reer Spain ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Barcelona xilli ciyaareedka soo socda, si uu ugu xoojiyo booska daafaca bidix.
Fabrizio Romano ayaa tilmaamay in Chelsea aysan dhib ku qabin fikradda ah in Marcos Alonso uu ka tagayo kooxda xagaagan, sidaa darteed Barcelona ayaa xoojisay wada xaajoodka ciyaaryahanka bil kahor si loo dhameeyo heshiiska.
Yeelkeeda, wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in Marcos Alonso uu doonayay kaliya inuu ku laabto Spain sida ugu dhaqsaha badan, fursad uu ugu biirayo Barcelona ayaana ka dhigeysa mid uu aad ugu farxo fikradaas.
Laakiin qodobka ay tahay in laga hadlo ayaa ah lacagta xiddiga reer Spain, maadaama Barcelona aysan qorsheyneynin inay dalab dhaqaale oo weyn ka gudbiso ciyaaryahan qandaraaskiisu dhacayo xagaaga soo aadan.
Waxaa xusid mudan in Marcos Alonso uu Chelsea kala qeyb galay xilli ciyaareedkan 46 kulan, waxaana uu ku guuleystay inuu dhaliyo 5 gool, islamarkaana uu 4 gool kale uu ka caawiyo saaxiibadiisa kooxda.
Tababare Jurgen Klopp oo labo abaal-marin ku garaacay Macallinka ka qaaday horyaalka Premier League ee Pep Guardiola